रोबर्ट इन्ग्लुन्डको 'नराम्रो सपनाको ब्लेन्ड' कफिले तपाईंलाई ढिलाइ रहन मद्दत गर्दछ
स्ट्रीमि Movies चलचित्रहरू
स्ट्रिमि Series श्रृंखला
मनोवैज्ञानिक डर (थ्रिलर्स)
अनौंठो र असामान्य
आईहोरर फिल्म फेस्टिवल
घर हरर मनोरन्जन समाचार रोबर्ट इन्ग्लुन्डको 'नराम्रो सपनाको ब्लेन्ड' कफिले तपाईंलाई ढिलाइ रहन मद्दत गर्दछ
हरर मनोरन्जन समाचार
by ट्रे हिल्बर्न III सेप्टेम्बर 28, 2020
द्वारा लिखित ट्रे हिल्बर्न III सेप्टेम्बर 28, 2020
डेडस्ड कफी भनेको कफी प्रेमी र डराउने प्रेमी सपनाहरू साकार बनाउने बारेमा हो। यस पटक उनीहरूको रबर्ट ईन्ग्लुन्डको सहयोगमा फ्रेडी क्रुगरले पनि सराहना गर्छन्।
डेडस्ले अन्य कफी प्रोजेक्टहरूमा विशेष भम्पीरा र बेला लेगुइसी मिश्रणहरूमा सहयोग पुर्‍याएको छ। यस पटक उनीहरूले रबर्ट ईन्ग्लुन्डसँग साझेदारी गरे राती सपना ब्लेन्ड कफि सिर्जना गर्न। लेबलले एन्ग्लुन्डले कफि मगलाई घिसार्दै र फ्रेडीको पन्जा लगाएको सुविधा दियो।
साइटको आधिकारिक विवरण रोबर्ट ईन्ग्लन्डको दुःस्वप्न ब्लेन्डको लागि यस्तो हुन्छ:
यो बन्डल रोबर्ट ईन्ग्लन्डको नाइटमेयर ब्लेन्ड कफीको दुई झोलाको साथ आउँदछ, सीमित संस्करण पुरानो बेसबल-शैली (राग्लन) शर्ट जुन बन्डलको लागि मात्र हो र सीमित संस्करण मग, जुन बन्डलको लागि मात्र हो। साथै शामेल हुनेछ कि तपाईं केवल म्याग्नेट, स्टिकर र अधिक सहितको बन्डलको साथ प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। साथै बन्डल शिपका सबै अमेरिकी आदेशहरू नि: शुल्क छन् त्यसैले चेकआउटमा छनौट गर्न नबिर्सनुहोस्। साथै तपाईंको बन्डलमा तपाईंले भविष्यको अर्डरको लागि २ future% छुटमा विशेष कुपन कोड प्राप्त गर्नुहुनेछ।
कफीको दुई थैली मध्ये एउटा तपाईंले प्राप्त गर्नुहुनेछ बन्डलमा मात्रै। त्यो नै हो जसलाई हामी "निलो ढोका" ब्याग भन्छौं जसमा रोबर्टले आइकनको अगाडिको ढोकाबाट बाहिर हेरेका छन्। त्यो विशेष झोला डिजाइन फेरि उपलब्ध हुनेछैन।
अन्तिम र निश्चित रूपमा कम्तिमा पनि, प्रत्येक जसले प्रि-अर्डरहरू प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गर्नेछन्। रोबर्टले सीमित निलो ढोकाको bags० थैलोमा हस्ताक्षर गर्नेछ। Rand० अनियमित अर्डरहरूले package ″ x50 ″ होलोग्राम "तपाइँ एक विजेता" पाउनुहुनेछ तपाईंको प्याकेजमा स्टीकर। यदि तपाईंले यसलाई प्राप्त गर्नुभयो भने, हामीलाई जानकारी दिनुहोस् र त्यसको लगत्तै हामी तपाईंलाई हस्ताक्षर गरिएको झोला पठाउनेछौं! अब, ती out० मध्ये १ जनाले ठूलो पुरस्कार पाउने छ। कफिको हस्ताक्षर गरिएको झोलाको साथ, तपाईं पनि एक आधिकारिक नाइट सपना ग्लोभ जीत्नुहुनेछ जुन एन्डरस एरिक्सनले बनाएको थियो दुःस्वप्न ग्लोभ्स आफैं!
ध्वनी धेरै राम्रो छ र हामी ती मध्ये कुनै एक बेसबल टिजको स्वामित्व राख्दैनौं। तपाईंको अर्डर गर्न डेडस्ल्डको दुःस्वप्न ब्लेन्ड हेडको लागि यहाँ.
यस जेसन Voorhees कफी तालिका जाँच गर्नुहोस्।
कफीDeadledफ्रेडी क्रेउगरदुःस्वप्न ब्लेन्डरोबर्ट इland्गल्यान्ड
ट्रे हिल्बर्न III
ट्रे एक भिडियो स्टोरको aisles बीचको बीचमा शालेल भयो। एक क्रोनबर्बियन प्रेरणा अनुक्रम पछि, उहाँ आधिकारिक रूपमा फिल्म र भिडियो खेल दुबैमा फ्यूज भएको छ। उनले सबै चीजहरू पप संस्कृति लेख्दछन्, र गल्तिले दुई शार्कलाई लात हान्छ र बाँच्दछ। उसलाई एउटा फलो दिनुहोस् र उसलाई कुरा गर्नुहोस् तर केहि न्यायी @TreyHilburn।
यी '' प्रेतवाधित हवेली / हेलोवीन 'चित्रहरूले जेमी ली कर्टिसबाट प्रेम प्राप्त गर्दछ
'Vampires VS The Bronx' ट्रेलरले 'हराएको केटा' र 'Goonies' Vibes बन्द गर्छ
नेटफ्लिक्सको 'निवास ईविल: अनन्त ... को लागी नयाँ चरित्र ट्रेलर
अप्रिल 15, 2021
'एएमसीको दी द वॉकि De डेड युनिभर्स' ...
'बाह्य अन्तरिक्षबाट योजना 9' तालिका पढ्नुहोस् सेट ...
बुबाले जम्प डराउँदछ जब अनुहार देखा पर्दछ ...
डेनभरमा एउटा नयाँ डरावनी बार खोलिएको छ, ...
अप्रिल 14, 2021
समीक्षा 'Creepshow' सत्र2एपिसोड 3: सही ...
Shudder मा हरेक हरर स्वाद को लागी केहि केहि छ ...
"डेमोनिक चिहुआहुआ" पालतू पशु अपनाउने पोष्ट अझै पनी बलियो हुँदै गइरहेको छ ...
लेखक / निर्देशक अली LeRoi 'अमेरिकी शरणार्थी' निर्देशित गर्न सेट ...
वाच: 'फ्ल्यासब्याक' ट्रेलर एक माइन्ड-बेन्डिंग रोलर कोस्टर हो ...
क्याटोरिजहरू ब्राउज गर्नुहोस्
क्याटोरिजहरू ब्राउज गर्नुहोस् श्रेणी चयन गर्नुहोस् अमेजन (चलचित्र) ()) अमेजन (श्रृंखला) ()) AppleTV + (१) ब्लू रे (१) हास्य डर ()१) हास्य ()) फेसबुक (श्रृंखला) (१) कल्पना (२)) फुटेज भेटिए (२१) गोर (२२) HBO (चलचित्र) ()) HBO (श्रृंखला) ()) हरर पुस्तकहरू ()२) हरर मनोरन्जन समाचार (१०,१०10,352) हरर फिल्म (144०) हरर श्रृंखला (२२) हरर सबजेन्स (१) Hulu (श्रृंखला) ()) अन्तर्वार्ता (फिल्म) (२)) अन्तर्वार्ता (श्रृंखला) (१) LGBTQ हॉरर (२ 29) सूचि (चलचित्र) (२)) सूची (श्रृंखला) (१) बजार ()) दानव डर (ror) चलचित्र समीक्षा (११) चलचित्र ()) संगीत (२)) नेटफ्लिक्स (चलचित्र) ()) नेटफ्लिक्स (श्रृंखला) (१)) गैर-कल्पना (१) अलौकिक ()२) मनोवैज्ञानिक डर (थ्रिलर्स) ()०) श्रृंखला समीक्षा (१) Shudder (फिल्म) (२)) Shudder (श्रृंखला) ()) स्लाशर ()) अनौंठो र असामान्य ()०) स्ट्रीमि Movies चलचित्रहरू (१)) स्ट्रीमि Series श्रृंखला ()) खेलौना (१) ट्रेलर (फिल्म) () 103) ट्रेलर (श्रृंखला) (२)) साँचो अपराध () 41) भिडियो खेल (१ 161०) यूट्यूब (फिल्म) (२) यूट्यूब (श्रृंखला) (१०)
Panic Fest 2021 समीक्षा: 'हूपर रिटर्न्स' हो ...
@ २०२० - सबै अधिकार सुरक्षित।